စိတ်ကြွဆေးကြောင့် ရယ်တဲ့လား——— | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စိတ်ကြွဆေးကြောင့် ရယ်တဲ့လား———
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Aug 16, 2011 in Copy/Paste | 45 comments
မူးယစ်ဆေး ရည်းစားစုံတွဲ အမျိုးကောင်းသားသမီးများ
အင်းပြောမယ်သာပြောရပါတယ်။ကြားရသူ အပေါင်းနားနဲ့ မနာ ဖဝါးနဲ့ နာစေ့ချင်ပါတယ်။မှားကြပြန်ပါပီတဲ့။အဲဘယ်လို များတုန်း။ဘယ်တုန်းကလဲ။ဘယ်သူတွေလဲ။ဘာကြောင့်လဲ။အမျိုးမျိုးသော မေးခွန်းတွေ လားပေါင်းများစွာ အဖြေကျပ်အနေကျပ်လှပါရဲ့ ။ချစ်သူ သမီးရည်းစား တွေ ချိန်းတွေ့ ကြရာက နေဖြစ်ကြတာပါတဲ့။အယ် ချိန်းတွေ့ ကြတာ ဘာဆန်းသလဲ မမေးပါနဲ့ဟုတ်ဖူးလား။ဟုတ်ပါတယ် ဘာသာဘာဝ ရှိကြတာပေါ့။ခုက နည်းနည်းပို ဆန်းနေမလားဘဲ။ဘယ်လို မှထင်မထားတဲ့ လက်လွန်ခြေလွန် နယ်ကျော်ကြတာပါတဲ့။ဘယ်လိုကြီးလဲနော်—?ဒီပို့ စ်ကို ရေးမယ်ဆိုတော့ ဒီအဖြစ်က ဟုတ်မှဟုတ်ပေါ့ မလား. စုံစမ်းရသေးတယ်။ဒေသခံတွေရော၊နယ်မြေရဲစခန်းပါ၊ကျောင်းသားတွေပါ မကျန် အားလုံးလိုက်မေးရတော့တာပေါ့။ဘယ်သူ တဦးတယောက်ကိုမှ မနစ်စေလိုတဲ့ အတွက်နာမည်များကို ချန်လပ်ခဲ့ပါမယ်။
ဖြစ်ပျက်တာက မုဒိမ်းမှုလား၊အလိုတူအလိုပါများလား ရွာသားများကူပြီးစဉ်းစားပေးကြပါဦး။ဘယ်လိုဖြစ်ပါစေ အားလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိမယ့်မက်ဆေ့စ်လေး ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဝေငှ ရကျိုးနပ်ပါပီ။
ဒီလိုပါ—စစ်တွေတက္ကသိုလ် ပထမနှစ် ဓာတုဗေဒ ကျောင်းသူလေးက သူ့ ချစ်သူ ကောင်လေးနဲ့ ချိန်းတွေ့ ဖို့ ရာ ကျူရှင်ကနေ လိုက်သွားရာကစတာပါဘဲ။သွားချိန်းကြတဲ့နေရာက. စစ်တွေမြို့မရုပ်ရှင်ရုံပါတဲ့။ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ အတွဲတွေ ချိန်းကြတာမဆန်းပါဘူးနော်။ကောင်လေးက ရေသန့် ဗူးလေးတဗူးနဲ့ စားစရာ အချို့ ဝယ်တယ်ပေါ့။ဒီလိုနဲ့ စကားပြောလိုက်၊ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်၊ရေသောက်လိုက်၊မုန့် စားလိုက်ပေါ့။ချစ်သူဘာဝ ဟိုတို့ သည်တို့ ပေါ့။ကောင်လေးကလဲ စားလိုက်သောက်လိုက်ပါဘဲ။ဒါပေမယ့် ရေသန့် ဗူးထဲမှာ ကောင်လေးကကြိုပြီး စိတ်ကြွဆေးတွေထည့်ထားပါသတဲ့။မိန်းကလေး ကိုဘဲတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ယောက်စလုံးအတူတူဒီဗူး ကိုဘဲသောက်ကြတာလေ။ဆေးအချိန် တက်လာတော့ပြဿနာကစပါပီ။အတင်းဖက်လဲတလင်း နဲ့ပေါ့။ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရနဲ့ လွန်ကဲလာတော့ ဘေးဘီက လူများဝိုင်းဟန့် ပေမယ့် လုံးဝမရတော့လို့ ရဲစခန်း ဖုန်းဆက်ခေါ်ရပါတော့တယ်။တာဝန်ရှိသူ တွေရောက်လာတော့လဲ. ဆေးရှိန်မပြေ သေးတဲ့ နှစ်ယောက်ဟာ ဝုန်းဒိုင်းကြဲ သောင်းကျန်းနေကြတုန်းပါဘဲ။ အားလုံးသောရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်များလဲ ရုပ်ရှင် မကြည့်ကြတော့ဘဲ ဇာတ်ဝင်ခန်း အချစ်ဖွင့်ခန်းကို ဝိုင်းကြည့် နေလိုက်ကြတာ ဟိုနှစ်ယောက်ကို ရဲကဝိုင်းပြီး ကိစ္စပြီးငြိမ်သည်ထိ ယိုင်ကာသလိုကာပေးကြရပါတယ်တဲ့။နောက်တော့ ဆိုင်ရာလူကြီးများကခေါ်ယူ စစ်ဆေးပြီး အရေးယူထားပါတယ်တဲ့။ယောကျာ်းလေးကတော့ခု အချုပ်ထဲမှာပါ။မိန်းကလေး ဖြစ်သူက သူသတိရလာတဲ့အခါ သူဘာကိုမျှမမှတ်မိကြောင်း၊ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတော့ ဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ရုပ်ရှင်ကို သွားဖို့ သူ့ ကောင်လေးက ကျူရှင်တွင်လာခေါ်ကြောင်းနဲ့ သူ့ စက်ဘီးကျူရှင်တွင်ကျန်ခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုပါတယ်။မိန်းကလေး မိဘများက မူးယစ်စေသော စိတ်ကြွဆေးဖြင့်မြူဆွယ်သည်ဟု တိုင်တန်းတရားစွဲဆိုထားကြောင်းပါ။
မူးယစ်ဆေးကြောင့် မှားကြတာလား၊နဂိုက ရောဘယ်နှစ်ကြိမ်မှား ဘူးကြသလဲကတော့ သူတို့ သမီးရည်းစားဘဲသိမှာပါ။ဘယ်လို အရေးယူမလဲ ကတော့ ခုထိမသိရသေးကြောင်းပါ။ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် မှာ ယုံလို့ ပုံအပ်မိပါတယ်ဆိုမှ ခုလိုကြီးလူမြင်ကွင်းကြီးထဲဖြစ်ပျက်တာကတော့—–
အမလေးလေး ဘယ်လိုကြီးလဲ ။ တကယ်ကြီးလား … ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ… ရှက်စရာလည်း အလွန်ကောင်း တဲ့ဖြစ်ရပ်ကြီးပဲ …
အောင်မလေးလေး မိန်းကလေးရှင် မိဘတွေကတော့ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းနဲ့ မျက်နှာတောင်ပြ၀ံ့ကြပါ့မလား မသိဘူး။
ဒါတကယ့်အဖြစ်လား တကယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်ဆိုးရွားတဲ့
အဖြစ်အပျက်နဲ့ အပြုအမူပါပဲ …
ဒီလိုမျိုးကြံမယ်ဆိုရင်လဲ အခုလို လူမြင်ကွင်းမှာဆိုတော့ စဉ်းတော့
ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ နောင်မိန်းကလေးတွေအကုန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စေတဲ့ အရာတစ်ခုပဲ။ ဘယ်သူကျွေးကျွေး စားသင့်မစားသင့်ပါ ဆင်ခြင်ရတော့မလိုဖြစ်နေပြီကော။ ဒီလိုမျိုးဆေးကိုကော ဆေးဆိုင်တွေက ရောင်းနေသလား။ရောင်းခွင့်တွေကော ပေးထားသလား။ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေပဲ။ တကယ့်ကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ပါပဲ။ လူကြီးမိဘတွေလည်း သားသမီးတွေကို မပြုလုပ်မပြုသင့်တာတွေ မလုပ်ဖို့ ဆုံးမပဲ့ပြင်သင့်ပြီးထင်တာပဲ။
စိတ်ကြွဆေးနဲ့.. အဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့… ကမ္ဘာကျော်ဆေးဖြစ်သွားမှာပဲ..။
လိင်ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်တဲ့.. ပစ္စည်းတွေ..ဆေးတွေရောင်တဲ့ဆိုင်မှာတောင်.. အဲဒီလိုဆေးမျိုးရှိတယ်… တခါမှ မကြားဖူးဘူး..။
ကိစ္စပြီးသည်အထိ ..ကွယ်ကာပေးရတယ်ဆိုတာလည်း …မဖြစ်နိူင်လောက်ပါဘူး..။
ကိုခိုင်ရေ ဒီပို့ စ်ကိုတင်မလို့ ဆိုပြီးစဉ်းစားတော့ သတင်းက ဟုတ်မဟုတ် စုံစမ်းတော့ အမှန်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကာယကံရှင်တွေကို နစ်နာလိုစိတ်အလျင်းမရှိပါဘဲ. နောက်နောင် မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများ ဆင်ခြင်ကြဖို့ ဥပမာလေးတခုအဖြစ်ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ ခုပြဿနာဖြစ်တဲ့ စစ်တွေမြို့ဆိုတာမှောင်ခိုစီးပွားရေးမြို့တော်ပါ။တဖက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံတွေက နေ ကွမ်းစားဆေးမျိုးစုံ၊ဆေးမျိုးစုံအပါအဝင် မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြတာ ဒေသခံပြည်သူတွေရော အားလုံးအသိပါ။ဘယ်လိုဆေးအမျိုးအစားကိုသုံးတယ်သေချာမသိရပေမယ့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးလို့ ပြီးသွားပါပီ။အားလုံးအတွက် စဉ်းစားစရာလေးပါ—
Dear Thu Gyi,
I agree that no legal drug is extraordinarily effectiveness to female like it.
( even Viagra & Cialis are effective for male, but, not for female )
But, I am sure, there are some illegal drugs that can stimulate the female.
For example, “Spanish Fly”
( When ingested, preparations containing cantharides once excreted in the urine irritate the urethral passages, causing inflammation in the genitals )
It’s really effective to both male & female. ( trust me )
It’s colorless liquid & 1 or2drops is enough for one person to stimulate.
By my knowledge,
Medicine company didn’t produce it as medicine,
because its side effects are too bad & un-repairable.
( cantharides can cause painful urination, fever, and sometimes bloody discharge, and “permanent” damage to the kidneys and genitals )
That’s why, it became illegal drug &
It can be get in Black Market, but expensive.
“The reason of aphrodisiac effect due to the chemical structure of Cantharidin  , this formula has the Epoxied group which cause irritation in Urinary Tract System starting with damaging the Nephrons in the Kidney & irritating the Urethra (causing the feeling of aphrodisiac effect). Also the Half Life for this structure is 0.69 0.03 h . This feature answers why it used asadate rape drug material”
ဆေးဆိုင်မှာတရားဝင်ရောင်းချတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်တွေအသုံးပြုကြတဲ့ ဆေးဝါးတွေမှာတောင် physician အညွှန်းနဲ့သောက်ကြဖို့contraindication ပေးထားပါတယ်။side effect ကနှလုံးနဲ့ ကျောက်ကပ်ကို တိုက်ရိုက်ထိတာပါ။ foreign resident မန့် ထားတာအရမ်းကောင်းပါတယ်။ကျေးဇူးပါရှင်
သူတို့ အစား မျက်နှာပူလိုက်တာနော်
ကောင်းလိုက်တဲ့ဆေး ကြားဘူးပေါင် တစ်ခါမှ
ခုဟာက လူမြင်ကွင်းမှာ အဆုံးစွန်သွားတာလား
ဟုတ်ပါတယ် အားလုံးသောရွာသားများ သို့ လော သို့ လောဖြစ်စရာပါ။ဒါပေမယ့် စဉ်းစားစရာတခုက သူတို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့နေ့ ကကျောင်းဖွင့်ရက်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရုံမှာလူရှင်းတာရယ်၊သူတို့ ထိုင်တဲ့နေရာက ၁၅၀၀ ကျပ်ပေးရတဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးချောင်ထဲမှာဖြစ်တာရယ် ကြောင့်အခြေအနေအားလုံး ပြီးဆုံးခါနီးမှာမ ထိန်းလို့ နိုင်တဲ့ပုံပါ—စိတ်ကြွဆေး၊မူးယစ်စေတတ်သောဆေးဝါး မျိုးစုံကို စစ်တွေမြို့မှာတင်မဟုတ်ပါဘူး တောင်ကုတ်မြို့၊ကျောက်တော်မြို့များတွင် လမ်းဘေးကွမ်းယာဆိုင်များတွင် အချိန်းအချက်လုပ်လွယ်လင့်တကူဝယ်လို့ ရနေတာကလဲ ပြဿနာတွေရဲ့ အစဇစ်မြစ်ပါ
ဆေးကြောင့်ဆိုရင်တော့ ကောင်းလိုက်တဲ့ဆေးပဲ လို့သာပြောချင်ပါတယ်။
ကျုပ်ကလဲ ဒါတွေ သိပ်မသိပါဘူး။
သိတာတခုတော့ပြောမယ်။ နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့နာ ကြပါ။
ကျုပ်သိတဲ့ထဲက တယောက်တလေမှာ ဒီကိစ္စမျိုးကို လူမြင်သူမြင်ပြုချင်တဲ့ စိတ်မျိုး (ကျုပ်အထင်တော့ စိတ်ရောဂါမျိုး) ရှိပါတယ်။
တခါက လူခြောက်ယောက်အတူ နာမည်ကြီးကြီး (နာမည်ဆိုးဆိုး) ကာရာအိုကေတခုသွား၊ အခန်းကြီးယူ ၊ကောင်မလေးတွေခေါ် ပေါ့လေ။ ပြီးတော့ စားသောက်မူးရူးကြတုန်း အဲဒီထဲကတယောက်က ကောင်မလေးကို ဆေးထည့်တိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ စားပွဲအောက်ဆွဲသွင်းရော။ (အဲဒီစားပွဲက ဆက်တီစားပွဲမျိုးအနိမ့်မဟုတ်ဘူး။ ဒါလောက်ဆို ရန်ကုန်က သွားဘူးတဲ့သူတွေသိပြီ။)
ဘေးကသူငယ်ချင်းတွေက ဒီနေရာမှာမလုပ်ဘို့ ။ အခြားအခန်းလွတ်တခုယူပြီးလုပ်ဘို့ ၀ိုင်းပြောတယ်။
အဲဒီကောင်က ဘာပြောသလဲသိလား။ ဒီတပွဲက စားပွဲအောက် – ခဏနေရင်နောက်တပွဲက စားပွဲပေါ် ….တဲ့..။
အဲဒီကောင်တွေလဲ လိုက်ဖ်ရှိုးပြီးမှပဲ ကောင်မလေးကို တသိန်းပေးခဲ့ပြီး ဆောရီးလုပ်ရင်း ပြန်ကြရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အစကတော့ ပိုက်ဆံလိုလို့ ကာရာအိုကေလို အနှိပ်ခန်းလိုဟာမျိုးမှာ ၀င်လုပ်ရင်း တစတစနဲ့ မထူးတော့ပါဘူး မထူးတော့ပါဘူးနဲ့ နစ်သွားတဲ့အခါ ဒီလိုအဖြစ်ခံရတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ ဒီခေတ် မိန်းကလေးငယ်လေးတွေ ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ ခေတ်အလျှောက် လွပ်လွပ်လပ်လပ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေထိုင်တဲ့အခါ မတော် လူရွေးမှားမိရင် (ချောင်းခတောင်းပြီး သူငယ်ချင်းတွေခေါ်ပြတဲ့ လူမျိုးနဲ့တွေ့ရင်) အရှက်ရတတ်ပါတယ်။
ပြီးတော့… အဲဒီအတက်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ မတတ်မြောက်ကြဘူး
တော်ကြာ စုန်းပြုစားတယ်ထင်နေကြမှာစိုးလို့လေ …
စုန်းတစ်မျိုးသားလုံးကိုယ်စား ကြိုပြောထားပါတယ် …..
စုန်းထီးတွေဆီမှာ ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ မှော်ဆရာတွေဆီမှာ ရှိသလိုလို
မှော်ဆရာတွေကပဲ ဒီအတတ်ကို တတ်မြောက်သလိုလို ဖြစ်နေပါတယ် ။စကားပြောဆင်ခြင်ပါ။
ဒီအတတ်ကို တတ်မြောက်တာက ဂျလေဘီ 109/110 မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ မျိုးနွယ်စုပါ။ မှော်ဆရာနဲ့ ဘာမှ မပတ်သက်ကြောင်းလဲ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
စကားအကောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုး တကယ်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
ယောင်္ကျားလေးက သူ့သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး သောက်မယ့်အအေးထဲကို ဆေးထည့်လိုက်တာ ။
ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးရည်းစားက ချက်ချင်းသတင်းရသွားပြီး အအေးဆိုင်ကို လိုက်ခေါ်တော့ ကောင်မလေး လူစိတ်ပျောက်ချင်ချင် ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒါ အနီးအနားက အဆောင်ပိုင်ရှင် အဒေါ်ကြီးကို အကူအညီတောင်းပြိး အဆောင်အခန်းထဲ လူအင်အားသုံးပြီး ထည့်ပိတ်ထားလိုက်ရတယ်။ဒါတောင် ကောင်မလေးက လိုက်မယ်လိုက်မယ်တကဲကဲနဲ့ ရုန်းကန်နေလို့ မနဲ ချုပ်ထားရပါတယ်။
ဆေးထည့်တိုက်တဲ့ကောင်ကတော့ ကောင်မလေးရည်းစားက သတ်ဖို့လိုက်ရှာနေလို့ အဝေးသင်တောင်ဆက်မတက်ရဲပဲ ဇာတိကို ပြန်ပြေးရတဲ့အဆင့်ပါ။
ကျွန်တော့အထင် လိင်စိတ်ကြွဆေးဆိုတာထက် မူးယစ်ဆေး ဖြစ်နှိုင်ပါတယ်။
ဖြေဆေးအနေနဲ့ ပြောရရင် အဲဒီ့ဆေးတွေက ရေနဲ့ရောတိုက်လို့မရလို့ စပါကလင်လို ကောင်မျိုးနဲ့ တိုက်တတ်ကြတယ်လို့ သိရတယ်။
ဒါကြောင့် ဒါမျိုးကြုံရရင် ရေများများတိုက်ရင် ၊ အချိုမှုန့်ကို ရေဖျော်တိုက်ရင် ဆေးရှိန်လျှော့သွားတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လေတိုက်လေ ပို အသိစိတ်ပျောက်လေ ပါ။ ဒါကြောင့် လေကွယ်ရာမှာ ထားပြီး ချွေးများများ ထွက်အောင်လုပ်ရင် ပြေသွားတတ်ပါတယ်း။
အကောင်းဆုံးကတော့ ကာကွယ်ဖို့ပါ။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဒါမျိုးအောက်လမ်းဆေးတွေကို ချက်ချင်းပြေအောင်လုပ်တဲ့ ဆေးက မှော်ဆရာကိုယ်တိုင်လဲ မဖော်တတ်ပါသေးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အင်း ဒုက္ခ….. ဒုက္ခ
ဖြစ်နိုင်ချေ နဲတယ်လို့ ထင်ပေမဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်တကယ်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျနော်ထင်တာကတော့ သူတို့အတွက် ဒါပထမဦးဆုံး အတွေ့အကြုံဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်ကြွဆေးနဲ့ မူးယစ်ဆေး ရောသုံးတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
အားလုံးယုံကြည်အောင် … အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြရန်
အဲဒီတုန်းက ရိုက်ကူးခဲ့တာများရှိရင် လူပုံတွေဖျက်ပြီး … တိုးတိုးတိတ်တိတ် မျှဝေပေးကြည့်ပါလား ….
ကိုရင် စုန်းထီးပြောတာ လက်ခံပါတယ်။ကျွန်မတို့ ဆီမှာက အကြောက်တရားလွန်လွန်းကြတော့ ကင်မရာကိုင်ဟို ရိုက်သည်ရိုက်လုပ်ကြရမှာ အကြောက်ပိုကြတယ်။ရုတ်တရက်မမျှော်လင့်ဘဲ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတော့ ဖုန်းကင်မရာလောက်ဘဲလွယ်မယ်ထင်ပါတယ်။ခုချိန်ထိတော့ ဓါတ်ပုံအထောက်အထားမရသေးပါဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင်တင်ပေးပေါ့မယ်။
ကြားရ ကြားရ နားဝ မချမ်းသာလိုက်တာအေ…တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်ဆိုရင်တော့ မိဘတွေ ရင်ကျိုးပြီ..
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ် ၇ နှစ် သိမ်ကြီးဈေးမှာ သင်တန်းတက်တုန်းကတော့ ညဘက်သင်တန်းပြီးလို့ ဆင်းလာရင် အောက်မှာရှိတဲ့ ကွမ်းယာဆေးလိပ် လက်ပွေ့ဈေးသည်တွေဆီမှာ ဒီလိုဆေးမျိုးတွေ တွေ့မိတာပဲ… တစ်ကယ် စွမ်းမစွမ်းတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူးခင်ဗျာ… ဒါပေမယ့် ၀ယ်ချင်ရင်တော့ ညဘက်ဆို သိမ်ကြီးဈေး၊ ဆူးလေ၊ လသာ တစ်လျှောက်မှာ အဲ့ဒီလိုဆေးတွေရော… တစ်ခြားအကာအကွယ် အသုံးအဆောင်တွေရော အကုန်ဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
အခုလက်ရှိ အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲ့ဒီဆိုင်တွေ ရှိလားမရှိလားတော့ ကျွန်တော်လည်း မရောက်တာကြာတော့ မသိတော့ပါ
ဟုတ်ရင်ကျော် ပုပ်ရင်ပေါ်တဲ့..။ ဂယ်ဟုတ်ရင် သတင်းထွက်လာမှာပါ။ ရွာထဲမှာ ရခိုင်ပြည်က သတင်းတွေ တင်တတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဆီကတော့ ဘာသံမှ ထွက်မလာသေးဘူး…။ အတွေ့ထူးလဲဖြစ်၊ ဆေးအရှိန်လဲပါ၊ ဘေးကလူတွေကလဲ စာထဲမှာပါသလောက် ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်တာမျိုး မဟုတ်လောက်ဘူးနဲ့တူတယ်။ သက်ဆိုင်ရာက လာထိန်းတဲ့အချိန် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြစ်နေကြတာမျိုးအထိတော့ တွေးယူလို့ရတယ်။ သဂျီးတို့ပြောတဲ့ လူငယ်တို့ဘာဝ လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်လို့ သဂျီးအမိန့်ဖြင့် အားလုံးတိတ်စေသတည်း…။
သူတို့၂ယောက်ဘ၀တွေကချက်ခြင်း တိရစ္ဆာန်ဘ၀တွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ လူမြင်ကွင်းမှာဆိုတော့… စိတ်ကြွဆေးရောင်းတဲ့ဆိုင်
aungnng87 ကလည်း စိတ်ကြွ ဆေးေ၇ာင်းတဲ့ဆိုင် တွေကိုလည်း အစကတည်းက အရေးယူနေတာပဲလေ။ မမိလို့ ပေါ့။ အင်း ဒီပို့ စ် တင်ပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ။
Hight technology makes the people being better we hope.
But, we are suffering many types of trouble (side-effects) from the “explosion of high-tech”.
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မလည်းစုံစမ်းနေဆဲပါ။ဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့ အတွက် နောက်နောင်ဆင်ခြင်ရမှာ ဆိုတဲ့အတွေးလေး မိန်းကလေးအချင်းချင်းဝေမျှပေးစေလိုရင်းသာဖြစ်ပါသည်
အဲ.. ဘယ်လိုကြီးလဲ.. လူမြင်ကွင်းမှာ … အသိစိတ်ပျောက်ကုန်ပါပကောလား … နှစ်ဖက်မိတွေတော့.. ရှက်လွန်းလို့.. သေချင်နေကြမှာပါပဲ … ။
တကယ်ဆို ဟိုကောင်လေး အသုံးမကျတာ… ဘယ်နှယ့် .. ဆေးထည့်ထားတာ သိသိနဲ့ … ရုပ်ရှင်ရုံထဲ ခေါ်သွားရသလားနော် … ။
ဒီခေတ်မှာ မိမိရဲ့ ရည်းစားဆိုလျှင်တောင် ယုံရဖို့ အတော်လေး စဉ်းစားသင့်နေပြီနော်… ။ အထူးသဖြင့် … လွယ်လွယ်နဲ့.. ချစ်ကြ ၊ ကြိုက်ကြတဲ့ မီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွေ … ၊ တယောက်အကြောင်း တယောက် ဘာမှ မသိတဲ့ .. အွန်လိုင်း ချစ်သူတွေရယ် အန္တရာယ်လက်တကမ်းဆိုတာ မေ့နေကြတယ် ။
အော် တကယ်ကြီးဆိုရင်တော့ ရှက်လိုက်တာ
မြန်မာလူမျိုးများ အတုယူ မှားနေကြပါသည် …. သက်ဆိုင်ရာတွေက လည်း တားမြစ်သင့်ပါတယ်….. သူများကြားလို့မှမကောင်း တစ်ချိန်တစ်ခါက လူကြီးတွေကိုတော့ အားနာမိပါသည် …. ခေတ်ကတိုးတက်လာတာလား ခေတ်ပျက်လာတာလားတော့ မသိဘူး အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတာ … အဲလိုဖြစ်တော့ အားလုံး သိက္ခာကျတာပေါ့ မိမိကိုယ်တိုင်၊ ကောင်မလေး ၊မိခင်ဖခင်များ၊ ဆွေမျိုးများ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံ၊ လူမျိုး အားလုံးပါပဲ ဗျာ ……
ဟုတ်ပါတယ်။အရှက်အကြောက်ကြီးရမယ့် မိန်းကလေးတွေက ပွင့်လင်းတဲ့နေရာမှာလွဲမှားနေကြတယ် ထင်ပါတယ်။အမျိုးကောင်းသားသမီးများပီပီ ယဉ်ကျေးကြရမှာပါ
Dear မီးမီး သော်,
Is it the case you said ???
၄င်းအပြင် လွန်ခဲ့ သောအပတ်ကလည်း ဦးဥတ္တမပန်းခြံ အနီးရှိ မြို့မ ရုပ်ရှင်ရုံတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲပြီး သတိမေ့နေသော ကျောင်းသူ တယောက်နှင့် ကျောင်သား တယောက်အား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးသွား သည်ဟု မျက်မြင်များက ပြောသည်။
ဟုတ်ပါတယ် ခုကျွန်မတင်ထားတဲ့ ပို့ စ်က အဲဒီသတင်းပါဘဲ။လွန်ခဲ့သော အပတ်က မဟုတ်ပါ။ပြဿနာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ သြဂုတ်လ ပထမ အပတ်ထဲ မှာပါ။
But they didn’t said about sex,
they said, only used drugs.
ဗိုက်ဆာနေတဲ့ကျားကြီးက အနားရောက်လာတဲ့ သမင်မလေးကို မစားဘဲ ကသိုဏ်းရှုချင်ရှုမယ်လို့ ဦးဖောရိန်းက ဆိုချင်သလား….။
in this article —http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3409—
They only said that couple used drug & so, arrested them.
They didn’t said that couple was having sex in cinema hall.
ဦးဖောရိန်းရေ. အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပီ။သူတို့ ချိန်းတွေ့ ကြတာက ကျောင်းဖွင့်ရက်ဖြစ်နေတယ်၊နောက်တခုက ကောင်မလေးက စက်ဘီးကို ကျူရှင်မှာထားပြီး ကောင်လေးနဲ့ အတူတူရုပ်ရှင်ရုံကိုလိုက်သွားတယ်၊ မူးယစ်ဆေးရောစိတ်ကြွဆေးပါရောထားတဲ့ရေသန့် ဗူးကို ကောင်လေးကကြိုတင်ယူလာပေမယ့် အတူတူသောက်ဖြစ်ကြတယ်။စိတ်မထိန်းနိုင်လို့လူကလဲ ၁၅၀၀ တန်းမှာကပြတ်တယ်လေ။အဲဒီတော့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါက ပထမနှစ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရော မြို့နေလူထုပါအားလုံးသိတဲ့ ကိစ္စပါ။ဘယ်လိုမှ ကွယ်ဝှက်လို့ မရပါဘူး။နောက်ပြဿနာတခု ထပ်တက်နေတာက တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေရဲ့ ကျူရှင်ကိစ္စပါ။တရားလို ကောင်မလေးမိဘတွေက သူတို့ သမီး စက်ဘီး ကျူရှင်မှာကျန်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ သူတို့ သမီးဟာဘာကိုမျှ မမှတ်မိကြောင်း မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ကြောင်းတရားစွဲထားပါပီ။တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှ ဆရာဆရာမ များ ကျူရှင် မပြရတော့တဲ့အတွက် ပြဿနာ မီးခိုးကြွက်လျှောက်နေပီဖြစ်ပါတယ်။
Thank မီးမီး သော်
ဂျပန်မှာ Oshio ဆိုတဲ့ အနုပညာသမားတစ်ယောက်၊
အသက် ၃၁ နှစ်၊ အိမ်ထောင်ရှင်၊ ကလေးတစ်ယောက်အဖေ။
ဂျပန်မှာဈေးအကြီးဆုံး Roppongi Hills က အင်မတန် တိတ်ဆိတ်ပြီး
လူမသိနိုင်တဲ့ အခန်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာက…..
MDMAဆိုတဲ့စိတ်ကြွဆေး ၁လုံးသောက်ပြီး Pro တယောက်နဲ့နေတာ။
၂လုံးမြောက်မှာ ကောင်မလေး နှလုံးခုန်ရပ်သွားလို့……
စိတ်ပူပြီး…နှလုံးကို မာဆတ်လုပ်တာ နံရိုးတောင်ကျိုးတယ်။
သေတော့ လူတွေ သိကုန်တာပေါ့။
ဆိုချင်တာက…..ဒါနဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ proတွေတောင်
ထိုင်းမှာတောင် ဆေးတစ်ပြားရဖို့ ဘုန်းကြီး(အတုအယောင်ပါဆိုပေမယ့် သင်္ကန်းပါတယ်။)နဲ့ ….မိတာ..
ဟုတ်ပါတယ်။ခုလို ပြောပြပေးတော့. ကျေးဇူးပါနော်။အသိတရားလေးနဲ့ ယှဉ်ပြီး ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့ ဘောင်ဖြစ်ဖို့ ကျွန်မတို့ အကြီးတွေမှာ တာဝန်ရှိပါတတယ် လို့ နားလည်ထားပါတယ်။
Sex Education is necessary to put in High School Syllabus.
” စင်ကာပူမှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်ကို sex education ကို ကျောင်းသုံး သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ သင်ကြားရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အတန်းကြီးလာတာနဲ့အမျှ သင်ခန်းစာကိုပိုပြီး အတွင်းကြလာတာပေါ့။ “